စိန်ရဲမှစိန် Daring you! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Opinions & Discussion » စိန်ရဲမှစိန် Daring you!	11
စိန်ရဲမှစိန် Daring you!
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 6, 2015 in Opinions & Discussion | 11 comments
ဒီလိုဂျ….. ရွာထဲမှာ ဘွားဒေါ်ဂျီးထိ ဓါးကြည့်စိုဒဲ့ တဖက်ပိတ်တွေ အများကြီး ရှိသလို တပ်မဒေါ်သာငပိ တပ်မဒေါ်သာငပွ စစ်ဘောမ စစ်လမ်းနီးဒွေလဲ မရှားဗေပူး..။ အဲလို အစွန်းနှစ်ဖက်ကြား ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကြကြ ပြောဆိုဝေဖန်မိသူအဖို့ ပဲလှော်ကြား ဆားညှပ်ခံရဒေါ့သာပဲ..။ တနေ့ဂဒင် ဘွားဒေါ် အူးစောင်မှု အပေါ် ဝေဖန်မိလို့ အတီးခံလိုက်ရဒါ အလဲအကွဲပဲ.. ဒါပေမှည့်ဂျာ မပြောမဆို မတီးမမြည် စိုသလို ဒင်းရို့တွေ အတ္တကြီးနေဒါနဲ့ မြှုပ်မည့်လှေထဲ ကျုပ်တို့တွေ အဆစ်ပါမည်။ အင်ဂလံမှာနေ.. ကောင်ဟောင်မှာနေ.. ခြင်သိပ်ကျွန်းမှာနေသူတွေက ဒီမိုမရလည်း လေညှာဂ အနေသာဂျီး.. ခံရမှာက ခီမြှားတို့ ကျုပ်တို့လို ပြည်ဒွင်းက သာမန်လူဒွေ..။ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အနစ်နာခံစွန့်မည်ကြံလို့ ဖက်ဆစ်မဲလို.. ရဲဇုတ်ယာဂုလို ကောင်ဒွေရဲ့ ရန်ပြုခံရတာထက် တဖက်ပိတ်တွေရဲ့ စွဲလားစွပ်လား မောင်သားဂျင်းကိုယ်ခြင်းမစာ ပြောဂျဒါ ပိုအသီးနှာဒယ်…။
ထားပါဒေါ့လေ ကိုယ့်ကံနဲ့ကိုယ့်အကြောင်း… မြန်တျန့်ငွေဈေးကျပီး သူတို့ဒတွေ ငွေလွှဲဒဲ့အခါ အယင်ထက် ဆယ်ဆမက ပိုရပါစေလို့ပဲ ဒီက ဆုတောင်းမြစ်တာ ပို့ပါဒယ်။ မစိုင်ဒါတွေ အသာထား… ပြောချဉ်တာ….ဂ …
အန်အယ်ယ်ဒီနဲ့အတိုက်အခံတွေကလည်း ဘွားဒေါ် သမတ ဖြစ်ရမည် အူးတီချက်ထားသလို့ ဖွတ်စစ်တွေကလည်း လုံးဝအလျှော့မပေးဗူး။ ဂျားက ခွေးအလို ဝင်ဆွဲမည့် သပ်ချောင်ပါတီတွေကလည်း လှုပ်လီလှုပ်လှဲ့ဆိုတော့မြန်တျန့်နိုင်ငံရေး သော့ ကျသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို ကျုပ်တို့ လာဘ်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ဗူး..။ နှာဖက်စလုံး အသာရမည့် Win Win တော့လူဒိုင်း ဖြစ်ချဉ်ဂျဒါပဲ.. ဒါပေမှည် လာဘ်တွေ့ မနီးစပ်တည့်အခါ ဗျောင်းဗျံ reverse way စဉ်းစားရမည်။ အဲလို ချဉ်းကပ်ပုံ ဗျူ ဟာအသစ်ကို ဖော်ထုတ်သွားသူက နိုင်ငံရေးပညာရှင် ဒေါက်တာCatman..
သုအစိုရ..အတည့်စဉ်းစား မရလျင် ဗျောင်းဗျံ စဉ်းစားပေးရဒယ်..။ ဥမပါဗျာ… မိန်းမကို ဆိတ်နှာလို့ မယူဗူး.. ဒါက အတည့်တွေးဗုံ၊ ဖြစ်သင့်ဒါ ဆိတ်နှာလျင် မယူဗဲ အပြင်မှာ ဝယ်စားရမည်.. ဒါမှ ပြသနှာ ဖြေရှင်းနီးအဆစ်။ ဂလိုပဲ အခုလည်း ပြည်သူတခဲနက် ထောက်ခံတဲ့ ဘွားဒေါ်နဲ့ လက်နက်အပြည့်အစုံရှိတဲ့ ဖက်ဆစ်တပ် နှစ်ဖက် မလျှော့နိုင်လျင် နောက်တနှီး ကြံဆရအောင်…
ဘွားဒေါ် အာဏှာရရေး မလှုပ်တော့ ဗူးလို့ ကြေငြာလိုက်… ဆိုနီယာဂန္ဓီလို ပါတီဥက္ကဌဘဝနဲ့ တိုင်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး၊ အထောက်ပအပံ့ရရေးပဲ ဖောင်ဒေးရှင်းထောင်လုပ်.. ဖက်ဆစ်တပ်လည်း လွှတ်တော်က ထွက်သွားပေး။ အဲလို စိမ်ရဲသလား… ဘွားဒေါ် အာဏှာရလျင် တိုင်းပြည်ပျက်မည်ဆိုတဲ့ ဖွတ်စစ်တပ်၊ ကလားပြည်ဖြစ်မည်ဆိုဒဲ့ သင်ကန်းခြုံ မဘသတွေလည်း ဆိတ်အေးသွားမည်။ ဖွတ်စစ်တပ် ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ပျံ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးသီးသန့် လှုပ်စေခြင်တဲ့ ဒီမိုသမားများလည်း ကျေနပ်မည်။ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ရေစီးကြောင်းလည်း ပွင့်သွားမည်.. မီကောင်းလား..။
နိုင်ငံရေးသုခမိန် ငါကွ ဦးကြောင်ကြီး။။။။
ဦးကျောက်ခဲ says: တောက်ကြောင်ဇုတ်… အနှောင့်အသွားလွတ်အောင် မရေးဘူး….
ပြောရတာလည်း အပ်ကြောင်းထပ်… ကိုယ့်ပြည်ကိုယ်ပြန်နေမှာမို့…
win-win ကို သူများထက် ဖြစ်စေချင်တာ အမှန်…
မြစပဲရိုး says: . ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလဲ သူ သမ္မတ ဖြစ်ရေး ကို ရှေ့မတင်တော့ တာ အားလုံး သိ ပြီ။
ဒီတော့ သူ သည် အာဏာမမက်။
နိ အမျိုး အစိမ်းတွေ သာ အားလုံးကို တောင် မထိသေး။ ၅% လျှော့ လိုက်ဖို့ ကို တောင် ဆတ်ဆတ်ခါ Cat Cat လှံ နေတာ ကွဲ့။
သူရို့ ကို အရင် တရာရအောင် ပေး။
. နောက်မှပြန်လာခဲ့။ သို့ပေသည့် အရေခွံမပြုတ်အောင် တော့ သတိထားဟေ့။
@QUIL@ says: Lateral Thinking ကလေး လှသဗျ…
ဘယ်ဘက်ကမှ မရှော့ဒေါ့ ကျုပ်တို့ ပျီသူဂဘဲ ရှော့လိုက်ဘာ့မယ်…
ဇစ်ရှော့ပီး ရှူး သွားပေါက်မလို့ ပြောဒါ…
YE YINT HLAING says: ပြည်သူ ကို ပါးရိုက်မဲ့ဘက်
ထမင်း တနပ်လျှော့စား ခိုင်းတဲ့ ဘက်
တနေ့ ၂၀၀၀ ကျပ် နဲ့ လောက်အောင် နေ ခိုင်းမဲ့ဘက်
ဖယောင်း ထိုင် နဲ့ နေခိုင်းမဲ့ ဘက်
လယ် ယာမြေသိမ်း နေတဲ့ဘက်
အိမ် နီးချင်းတွေ ကို နိုင်ငံထဲသွင်းနေတဲ့ဘက်
စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ဘက်
ဘဏ်ကြီးတွေမှာ သန်းပေါင်းများစွာ သိမ်းဆည်းမြုပ်နှံနေတဲ့ဘက်
လေယာဉ် တွေ အဝေးကားတွေ ပိုင်တဲ့ဘက်
မြို့ကြီးတွေ မှာ ဘောလုးံ ကွင်းလောက် ကျယ်တဲ့
ခြံဝင်းကြီးတွေ ရေကူးကန်တွေ တိုက်တာကြီးတွေပိုင် တဲ့ဘက်
kai says: ဒေါ်စုသမ္မတဖြစ်နိုင်-မနိုင်အရည်အချင်းစစ်ပေးရမှာက…
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့.. လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌတွေလို့.. ခြေဥမှာပြဌာန်းထားပါတယ်..။
အဲဒီနေရာမယ်.. % မပါသမို့.. ၅၀%+၁ ကနေအဆုံးအဖြတ်ခွဲယူမယ်လို့ သာမာန်အားဖြင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
ဒီချုပ်က.. အခုရွေးကောက်ပွဲမှာ.. ခုံနေရာအားလုံးရဲ့.. ၆၇% (အနည်းဆုံး)နိုင်ထားရင်.. အဓိက Player ဖြစ်ပါတယ်…။
၆၀။ (က) နိုင်ငံတော်သမ္မတကို သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ရွေးချယ်
( ခ ) သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်အစုအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် –
(၁) တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ တူညီစွာ
ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်ရှိ ရွေးကောက်တင်မြှောက်
(၂) မြို့နယ်ကိုအခြေခံ၍လည်းကောင်း၊ လူဦးရေကိုအခြေခံ၍ လည်း
ကောင်း ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်လွှတ်တော်ရှိ ရွေးကောက်
(၃) ဖော်ပြပါလွှတ်တော်နှစ်ရပ်အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
( ဂ ) ယင်းအစုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီကဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးစီကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
များထဲမှဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထဲမှ ဖြစ်စေ
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်၊(ဃ) ဒုတိယသမ္မတများသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်
( င ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးပါဝင်သော သမ္မတရွေးချယ်
တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတလောင်းများဖြစ်သည့် ဒုတိယ
သမ္မတသုံးဦးအနက် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦးကို
နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ဆန္ဒမဲပေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်၊
( စ ) ထိုသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရန်
Ma Ma says: ဘွားဒေါ်က ပါတီဥက္ကဌအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးပဲလုပ်။
အဲ……..ဒါဆို သမ္မတနေရာ လစ်လပ်သွားပြီ။
သမ္မတရဲ့ ပီအေ နေရာလောက်ရအောင်ခုကတည်းက ဒီကြောင်ကို နိုင်ကွက်ရှာထားမှ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၁၀၀% နဲ့ ၅% တည့်လဲပေးးရမယ်ပေါ့??
အောင် မိုးသူ says: စိန်ရဲရင် စိန်လိုက်လေ
ကထူးဆန်း says: ဦးသိန်းစိန်ကို တော့ သရက်ခြံ ပို့ ….
သမတ ကို အရမ်းလုပ်ချင် နေတဲ့ ဦးရွှေမန်းကို ပေး … ရုပ်သေးရုပ်နေရာပို့
၀န်ကြီးချု ပ် ရာထူး ထပ် ဖော် လိုက် ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှဲ ..
ဦးမင်းအောင်လှိုင်အတွက် ပင်စင်ယူ ရမဲ့ သက်တမ်းကို ၆၃ ပြောင်းပေးလိုက် ..
YE YINT HLAING says: ဘဝတခုလုံးလည်း ပေးထားပြီးပြီ။
ခုဆို အသက်(၇၀) ရှိပြီ။
ယုံကြည်ချက် ရာနှုန်းပြည့် ထက် ပိုတယ်။
ဘွားတော် ဘွားတော်နဲ့ ခေါ်ပြီး
ပြောစရာတွေ တပုံကြီးထဲ က
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်ပုံစံ နဲ့ လူသတ်ပွဲတွေ ကိုဖန်တီးပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ပွဲ လုပ်ချင်နေတဲ့ သူတွေ ကို ပြောပါ ။ဝေဖန်ပါ။
ဒါမှ စေတနာနဲ့ အမှန်ကို အစားထိုးပြ မီးမောင်း ထိုးပြရာရောက်မယ်။
aye.kk says: စိန်ရဲမှစိန်